नेप्से परिसूचक ०.२० अंकले घट्यो, कुन कम्पनीको कारोबार कति ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
नेप्से परिसूचक ०.२० अंकले घट्यो, कुन कम्पनीको कारोबार कति ? हेर्नुस्
काठमाडौं / बुधवार नेप्से परिसुचक पुनः ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ०.२० अंक घटेर १ हजार २५८ दशमलव ४६ विन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत घटेको देखिएको छ । कारोबार भएका ११ समूहको परिसूचकमा ५ बुधवार रू. ३० करोड ४१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको रकम रू. ५ करोड ५२ लाख कम हो । यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव २३ अंक बढेर २७० दशमलव ५२ विन्दुमा पुगेको छ ।
आज विकास बैंक समूह, वित्त समूह, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह, ‘अन्य’ समूह र जीवन बीमा समूहको परिसूचक बाहेक अरु सबै समूहको परिसूचक घटेर बन्द भएको छ ।
आज मल्टीपर्पस फिनान्सको सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ६९ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ । उक्त कम्पनीले १ बराबर ८ दशमलव ६५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको छ भने कम्पनीको शेयर मूल्य १९ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २१५ (प्रतिकित्ता) कायम भएको छ ।
यसैगरि उन्नती माइक्रोफाइनान्सको शेयरमूल्यमा रू. ५२ ले वृद्धि भई अन्तिम शेयरमूल्य रू. ८५१ कायम भएको छ ।
घलेम्दी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी ३ दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ८१ कायम छ भने समता माईक्रोफाइनान्सको शेयरमूल्य ३ दशमलव ५७ प्रतिशत घटेको छ ।
कारोबार भएका १६९ कम्पनीमा ५८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ७४ कम्पनीको घटेको छ । साथै, ३७ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
बुधवार एनआईसी एशिया बैंकको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको सबैभन्दा बढी रू. २ करोड १७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएर अन्तिम मूल्य रू. ४६६ कायम भएको छ । कम्पनीको ४६ हजार ७८९ कित्ता शेयरको कारोबार भएको थियो ।
दोस्रो स्थानमा प्रभु बैंकको बढी कारोबार भएको छ । कम्पनीको रू. २ करोड ३ लाख बराबरको ७६ हजार २६६ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीका शेयर : दयनीय बन्दै ! (यस्तो छ विश्लेषण)
एनएमबी बैंकद्वारा २ अर्ब ३१ करोड नाफा आर्जन, ८८ अर्ब ४८ करोड कर्जा प्रवाह